Enye yeendlela eziqhelekileyo ekusebenziseni iiNkqubo zeNgcaciso zeJografi kukwakhiwa kwamanqanaba endawo ukusuka kulwazi oluvela ebaleni. Nokuba oku kumele uququzelelo, iiplani zomhlaba, okanye igridi yokuphakama, ulwazi luhlala luza kwiifayile ezahlulwe ngokhefana okanye ispredishithi se-Excel.
Itemplate ye-Excel yenziwe kuqala ukuba iguqule indawo ye-UTM, ukusuka kwifomathi yedesimali ukuya kwiidigri, imizuzu kunye nemizuzwana. Ukuchasana nje netemplate ebesiyenzile ngaphambili, njengoko kubonisiwe kumzekelo: Ukongeza: iyaziphinda zibe ngumtya.
Kule nqaku siza kubona indlela yokuqwalasela i-POP Gmail. Kulabo bahamba kakhulu okanye abafuna ukufikelela kwi-imeyile kwiikhompyuter ezahlukeneyo, ukusebenzisa umxhasi weMicrosoft Outlook kunzima; Nangona ngeenjongo zeziko kuphantse kungenakuphepheka, emva kokwazi i-Gmail kuvakala ngathi ngumqolomba ukusebenzisa i-Outlook engenzi nkqubela phambili ...
Oku kuhlala kuyingxaki, xa sihlela isicatshulwa se-html kwi-Microsoft Word okanye kwi-Live Writter. Ingxaki yikhowudi enjengemibuzo engaqhelekanga malunga nobuchwephesha beCAD Iya kusinika ingxaki, kuba amanqaku okucaphula esihlala kuwo kufuneka angqale ngqo ngolu hlobo lulandelayo: Imibuzo engaqhelekanga malunga nobuchwephesha beCAD Xa sifuna ukubuyisela ...
IMicrosoft Word ihlala yenye yeenkqubo esifunde ukuzisebenzisa ngaphandle kokuthatha ikhosi. Ngokucofa nokungena saqonda ukuba isetyenziselwa ukwenza amaxwebhu, ukuba ineetafile, nokuba iitafile zenza isishwankathelo esifana ne-Excel kwaye inezinye izinto ezongezelelweyo kwiLizwi eliLuhlaza okwesibhakabhaka. Khange ...
Ihlala isenzeka kuthi, ukuba silibale ukuba ifayili ibigcinwe phi. Ngamanye amaxesha siyisusa, siyivule kwifolda yokukhuphela okanye ngokulula i-injini yokukhangela ye-Windows eyintlekele. Ewe, ukuba le fayile iphakathi kwama-50 okugqibela esivulekileyo, eyona ndlela ikhawulezayo kukuyibona isuka ...
Amaxesha amaninzi xa ukopa idatha kwi-Intanethi ukuya kwi-Excel, amanani abonisa ikoma njengamawaka okwahlulahlula. Ngangendlela esitshintsha ngayo ifomathi yeseli ukuya kwinani, isengumbhalo kuba i-Excel ayinakuqonda amawaka okwahlulahlula emva kokuba inani linamanani amathandathu, oko kukuthi, ngaphezulu kwesigidi. Ndiza…
Internet kunye neBlogs, Ezahlukeneyo
Rhoqo kwenzeka kuthi, ukuba sisebenze kuxwebhu, emva koko umntu alutshintshe ngaphandle kokujonga uhlaziyo lotshintsho kwaye kungekudala okanye kamva senza uthelekiso phakathi kwezi zimbini. Nangona kunqabile ukuba ndibhale malunga neenkqubo zabantu abafayo, ndithatha eli thuba kuba lo msebenzi ubandakanyiwe kwiMicrosoft Word, kwaye uyayenza ...
ILizwi 2007 kunye neribhoni yayo, njenge-AutoCAD, isishiyele ezinye izinto ngaphandle kolawulo xa singxamile. Ingxaki bendijonge ukuyiguqula isicatshulwa ishiye oonobumba abancinci iye koonobumba abakhulu, eyayikukucofa okukodwa kwimenyu ngaphambili. Andinalwazi lokuba kuphi, kwaye ukuba ikho andinawo umonde owaneleyo, ke ndi ...
Ngexesha elidlulileyo ndikhe ndacelwa oku, kwaye ukusukela ukuba umhlobo ubonakala engxamile kwaye namhlanje lusuku lokubhiyozela izinto ezininzi, nasi isixhobo esikuvumela ukuba uguqule uququzelelo lwejografi, iidigri ukuya kwiidesimali. Kutheni le nto itafile yokuguqula kuqhelekile ukufumana ulungelelwaniso olukwidigri, imizuzu, imizuzwana, ...
IMapinXL sisicelo esakhiwe yi-ARTICQUE, ejolise kubantu baseofisini, abangazizo iingcali kwi-GIS kodwa abafuna ukuchukumisa iimephu ezinemibala. Sichitha ubomi bethu sifuna ukudibanisa iimephu zethu kwi-Excel, sisazi ukuba abanye abanakuba kude nezisombululo zeMicrosoft; kwaye oku sikwenzele iwaka ...
Kukho izixhobo ezahlukeneyo kwi-Intanethi ezikuvumela ukuba ufumane igama eliyimfihlo, okanye njengoko siza kulibiza ngcono namhlanje: igama eligqithisiweyo lefayile, andizimisele kule posi ukukhuthaza ububi; Endaweni yoko, chaza umngcipheko okholelwa ekubeni yonke idatha yethu ikhuselwe ngendlela elula emva kwegama lothando ...